Global Voices teny Malagasy » Al Jinane: Mampanjaka ny fahalalaham-pitenenana ao Maraoka · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 21 Novambra 2018 3:21 GMT 1	 · Mpanoratra Rachel Barenblat Nandika Raveloaritiana Mamisoa
Mandritra ny herinandro vitsy manaraka, hanolotra ny mombamomba ireo bilaogera voafantina hifaninana bilaogy avy amin'ny Reporters Sans Frontières izahay. Ity famantarana ity dia anisan'ireo andian-tantara. Tsidiho azafady ny pejy fandahatsaham-bato RSF  ary fidio izay bilaogy ankafizinao. Avy amin'ny tonian-dahatsoratra namanao
Tarik Essaadi no bilaogera ambadik'i Al Jinane . Ny teny filamatrany: “Bloguer pour comprendre la complexité du monde, “Mibilaogy mba hahatakatra ny fahasarotan'izao tontolo izao.” Al Jinane no hany bilaogy Maraokana tafakatra amin'ny famaranana Loka Freedom Blog karakaran'ny Reporters Sans Frontieres . Ao amin'ny lahatsorany mikasika ny fifantenana, manamafy i Essaadi fa “misokatra” amin'ny mpamaky azy ny Al Jinane satria manantena hampiseho ny “sehatra kolontsaina Maraokana sy ny maha-izy azy” ho an'ny mpihaino manerantany.
Nilaza i Essaadi, fa hankalaza ny tsingerin-taona voalohany ny Al Jinane, na dia manoratra ao amin'ny gazetiboky an-tserasera EMarrakech  ihany koa aza izy, gazetiboky efa tao anaty aterineto nanomboka tamin'ny taona 2000. “Filàna tranainy, ny mifampiresaka sy mieritreritra ‘ho an'ny maro”, hoy izy momba ny fanapahan-keviny hanomboka hibilaogy. Miezaka ny ho olom-pirenena manerantany i Essaadi, miorina amin'ny fahatsapana mivaingana ny eo an-toerana saingy maneho hevitra amin'ny raharaha manerantany tahaka ny olona eto amin'izao tontolo izao.
Maro amin'ireo lahatsoratra ao amin'ny Al Jinane no nosoratan'ireo vahiny mpanoratra izay nasain'i Essaadi handray anjara amin'ny resadresaka bilaogy. Tao anatin'ny lahatsoratra iray vao haingana , Mohammed Lebabi, manam-pahaizana iray namakafaka ny fihaonambe vao haingana mikasika ny hoe inona no iombonan'ireo “monotheisma” telo (Lebabi niresaka momba ny fanantenana mitsiry sy ny fahalalahana niainan'ireo Miozolomana Maraokana tamin'ny fiandohan'ny taonjato faha-21, na dia nanome tsiny ny fikambanana amin'ny tsy fisian'ny feo vehivavy aza izy). Ny lahatsoratra A L'Ombre d'Islam  kosa namoaka taratasy avy amina bilaogera vahiny, Mohsin Moueddin, milaza fironana mankany amin'ny finoana silamo sy ny toetra manan-danjany ary miampanga ny fitsarana an-tendrony anti-Miozolomana
Ireo no karazana feo navoakan'i Essaadi, ary miara-manolotra fijery mahavariana momba ny sehatra ara-kolotsaina sy ara-politika eo amin'ny fiainana Maraokana izy ireo. Na dia izany aza, tsy Maraoka ihany no ifantohany. Nibilaogy eto i Julien Pain momba ireo bilaogera noterena hitsahatra tsy hamoaka lahatsoratra any Singapaoro . Ary ho an'ny Andro iraisam-pirenena ho an'ny gazety, nanokatra ny varavarany i Al Jinane mba hamoaka lahatsoratra maromaro nofantenana manokana (matetika amin'ny endrika famintinana) amin'ny lohahevitra fahalalaham-pitenenana sy ny gazety manerantany. “
Manantena i Essaadi fa ho antso ho an'ireo tanora bilaogera Maraokana ny bilaoginy mba “hamoaka ny heviny” ary hitrandraka ny fahalalahan'ity vanim-potoana vaovao ity. Mankafy bilaogy miresaka ny tsy ampoizina izy, manakorontana ny fiarahamonina tsy mihetsika, ary mamakafaka ny kolontsaina (indrindra amin'ny fomba fifampitan-kolontsaina) — ireo, hoy izy, no anisan'ny toetra tsara indrindra amin'ireo bilaogy Maraokana tsara indrindra. Ny faniriany hahita Maraokana bebe kokoa mibilaogy no nitarika azy tamin'ny famoronana ny WMaker , sehatra famahanam-bilaogy malalaka voalohany ao Maraoka, ary mikasa hanao antso hanangana vavahadin-tserasera fibilaogina Blog.ma  atsy ho atsy izy. Nomem-boninahitra izy, hoy izy, noho ny fanendren'ny RSF azy, ary miandrandra ny hizara ny fomba fijeriny momba an'i Maraoka miaraka amin'ny mpamaky bebe kokoa mandritra ny fotoana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/11/21/129092/
 fandahatsaham-bato RSF : http://www.globenet.org/rsf/voteblog.php?lang=en
 Al Jinane: http://www.emarrakech.info/prana/index.php
 lahatsoratra iray vao haingana: http://www.emarrakech.info/prana/index.php?Ce_que_les_trois_monotheismes_ont_de_commun.html&id_article=150248
 A L'Ombre d'Islam: http://www.emarrakech.info/prana/index.php?A_l_ombre_de_l_islam.html&id_article=143253
 bilaogera noterena hitsahatra tsy hamoaka lahatsoratra any Singapaoro: http://www.emarrakech.info/prana/index.php?Contraint_de_fermer_son_blog.html&id_article=146195